Britain oo maalgalinaysa laamaha ammaanka - BBC News Somali
Britain oo maalgalinaysa laamaha ammaanka
Dawladda Britain waxay ku dhawaaqday lacago dheeraad ah oo la siinayo laamaha ammaanka si ay uga hor tagaan halista kooxda isku magacawda Dawladda Islaamka.
Lacagtani waxay hay’addaha sir doonka ee MI5, MI6, GCHQ, u ogolaandoontaa in ay qortaan 1,900 oo qof oo cusub.
Gollaha wasiiradda ayaa iyagana la filayaa in ay ku heshiiyaan in la kordhiyo dhaqaalaha lagu bixiyo ammaanka duulimaadyada hawada.
Arrintani waxay imaanaysaa kaddib dhacdadii jimcihii ka dhacday magaalada Paris, ee ay ku dhinteen 129 qof, iyada oo uu ka mid ahaa dadkaasi qof British ah, kooxda isugu yeerta Dawladda Islaamka ayaana sheegatay masuuliyadda weerarkaasi.
Rai’sal wasaare David Cameron ayaa sheegay in ay tahay halgan soo foodsaaraya jiil dhan, loo baahanyahay in aan u adeegsano dad la dagaalama kuwa doonaya in ay burburiyaan dadkiisa iyo qiyamkoodaba.
Hal daqiiqo ayaa laga aamusidoonaa Britain, iyada oo loogu baroordiiqayo dadkii ku waxyeeloobay weeraradii Pairs, Yurub oo dhana daqiiqad ayaa laga aamusidoonaa marka ay maalintu kala bar marayso wakhtiga Faransiiska.
Nick Alexander, oo British, ah ayaa la xaqiijiyay in uu ku geeriyooday weerarka Paris, wasiiradda arrimaha gudaha ee Britain, Theresa May, waxay sheegtay in ay dad kale oo British ahna ku dhaawacmeen weerarkaasi.